Gba alụkwaghịm na ụmụaka: nkwukọrịta bụ isi | Law & More B.V.
blog » Gba alụkwaghịm na ụmụaka: nkwurịta okwu bụ isi
Ozugbo emere mkpebi ịgba alụkwaghịm, e nwere ọtụtụ ihe a ga-ahazi ma si otú a tụlee. Ndị di na nwunye na-agba alụkwaghịm na-achọpụtakarị onwe ha na-akpali akpali mmetụta uche, na-eme ka o sie ike ịbịaru nkwekọrịta ndị ezi uche dị na ha. Ọ na-esikwu ike karị mgbe ụmụaka metụtara. Maka ụmụ gị, gị na ibe gị ịdị n’otu ma ọ bụ karịa. Ga-emekọchi ọnụ ọnụ. Nke a na-eme ka ịgba alụkwaghịm na ụmụaka nọ n'ọnọdụ ọ bụla na-atụ ụtụ isi nke mmụọ na-emetụta ụmụaka. Iji kewaa dị ka o kwere mee, ọ dị mkpa ịme nhọrọ ndị a ọnụ yana ezigbo nkwurịta okwu n'etiti ndị ọzọ bụ ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na unu ana-ekwurịta okwu nke ọma, ọ ga-eme ka obi ghara ịna-ajọ ibe unu njọ, kamakwa ụmụ unu.
Na-ekwurịta okwu gị ex-ibe
Anyị na-agbasa mmekọrịta anyị bidoro na atụmanya na ebumnuche kachasị mma. Na mmekọrịta, ị na-enwekarị otu usoro ị na-esi emeghachi omume na ibe gị dị ka ndị mmekọ. A ịgba alụkwaghịm bụ oge na-agbasa site na ụkpụrụ. Na ileru onwe gi anya nke oma, n'ihi na ichoro ime ihe di iche site ugbua gawa, maka onwe gi ma umuaka gi. Ma, mgbe ụfọdụ enwere ndakpọ olileanya na nghọtahie. Ndabere nke ọ bụla mmekọrịta bụ nkwurịta okwu. Ọ bụrụ na anyị eleba anya n’ihe na-adịghị mma na nkwurịta okwu anyị, ọ ga-apụta na ọdịda ndị ahụ adịghị esitekarị n’ihe a na-ekwu ná mkparịta ụka kama site n’otú e si ekwu ya. Onye nke ọzọ adighi ka ọ 'ghọta' gị ma tupu ị mara ya ị hụ onwe gị n'otu ọnyà ochie ahụ ọzọ. Nakwere na ịhazi ịgba alụkwaghịm bụ ọrụ siri ike n'onwe ya nye nwata. N'ihi nkwurịta okwu na-adịghị mma n'etiti ndị bụbu ndị mmekọ, ụmụaka nwere ike ịmalite inwekwu nsogbu nsogbu uche.
Mmetụta nke ịgba alụkwaghịm na ụmụ
Alụkwaghịm bụ ihe na-egbu mgbu nke esemokwu na-agakọkarị. Nke a nwere ike imetụta onye òtù ọlụlụ n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ mmetụta uche, mana ụmụaka. Ihe kachasị pụta maka ịgba alụkwaghịm maka ụmụaka bụ enweghị ùgwù onwe onye, ​​nsogbu omume, nchekasị na mmetụta ịda mba. Mgbe ịgba alụkwaghịm na-esemokwu na mgbagwoju anya, ihe ọ na-ewetara ụmụaka na-akawanye njọ. Iso ezigbo nne na nna na nne na nna bụ ọrụ mmepe dị mkpa maka ụmụaka. Ihe mgbakwunye ga-eme ka ọnọdụ dị mma, dị ka nne ma ọ bụ nna dịnụ nke na-enye udo, nchebe, nkwụsi ike na ntụkwasị obi. Ọnọdụ ndị a na-enwe nrụgide n'oge na mgbe ịgba alụkwaghịm. N'oge nkewa, ọ dị mkpa ka obere ụmụaka nwee ike iso ndị mụrụ ha nọrọ. Ezigbo mmekọrịta na nne na nna bụ isi ebe a. Mgbakwunye na-enweghị nchebe nwere ike iduga belata obi ike onwe gị, belata mbibi na nsogbu omume. Childrenmụaka na-enwetakwa nkewa dị ka ọnọdụ nrụgide nke ha na-enweghị ike ịchịkwa ma ọ bụ nwee mmetụta. N'ọnọdụ nrụgide na-enweghị ike ịchịkwa, ụmụaka ga-agbalịrị (ịnwa) ileghara ma ọ bụ ịgọnahụ nsogbu ahụ na ọbụna were ụdị nrụgide post-traumatic. Nchegbu pụkwara iduga n'esemokwu nke iguzosi ike n'ihe. Iguzosi ike n'ihe bụ ihe jikọrọ nne na nna na nwa nke na-ebilite mgbe a mụrụ ya, nke na-eme ka nwatakịrị na-eguzosi ike n'ihe nye nne na nna ya. N'ime esemokwu iguzosi ike n'ihe, nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ nne na nna pụrụ ịdabere kpamkpam na nwa ha. N’gba alụkwaghịm dị mgbagwoju anya, ndị nne na nna nwere ike ịmanye nwa ha mgbe ụfọdụ ka ọ họrọ. Nke a na - eme ka nwa ahụ nwee nghọtahie, onye na-achọkarị iguzosi ike n'ihe nye nne na nna ahụ. Inwe nhọrọ bụ ọrụ na-enweghị olileanya nye nwatakịrị, ọ na-edugakarị na ya ịgbalị ịhọrọ nne na nna. O nwere ike bụrụ na nwatakịrị bịara n’ụlọ nne ya site na ngwụsị izu ya na nna ya wee gwa nna ya na ọ dị mma nke ukwuu, mana maka nne ahụ na ọ na-agwụ ike. Nnyocha na-egosi na ọ dị mkpa ka nwatakịrị nweta nnabata site na nne ma ọ bụ nna ya ịnọrọ oge dị mma yana nke ọzọ. N’oge ụfọdụ ịgba alụkwaghịm, nwedịrị ike iche na nwatakịrị ahụ chere na ọ bụ ya ma ọ bụ mee ka ọ bụ ya kpatara ọdịmma nne na nna ya. A na-akpọ nwata ahụ ka ọ were nlekọta na-ezighi ezi. Ihe ndị a edeturu bụ ihe a na-ahụkarị n ’nne na nna ịgba alụkwaghịm ebe enwere ọtụtụ nghọtahie na esemokwu n’etiti ndị mụrụ ha.
Igbochi a ịgba alụkwaghịm
Dị ka nne ma ọ bụ nna ị chọrọ nwa gị ihe kasị mma, naanị na ọ bụ naanị ihe kpatara iji zere nsogbu nkwukọrịta. N'okpuru ebe a, anyị na-enye ọtụtụ ndụmọdụ iji hụ na ị ga-aga n'ihu na-ekwurịta okwu nke ọma na onye òtù ọlụlụ gị n'oge oge siri ike nke ịgba alụkwaghịm gị:
Ọ dị mkpa ka anyị na-ahụ ibe anyị ma na-ekwurịta okwu ihu na ihu. Gbalịa izere ịme mkpebi siri ike site na WhatsApp ma ọ bụ oku ekwentị.
Gee onye nke ọzọ ntị (mana lee onwe gị anya!) Gee onye nke ọzọ ntị nke ọma ma zaa naanị ihe o kwuru. Ewetala ihe na-abaghị uru na mkparịta ụka a.
Gbalịanụ ime ka udo dịrị ma na-asọpụrụ ibe unu. Ọ bụrụ na ị chọpụta na iwe na-ewe gị iwe mgbe ị na-ekwu okwu, kwụsị ya ka ị nwee ike iji nwayọ na-eme ya ma emechaa.
Ọ bụrụ na ị tọgbọ ihe niile ị chọrọ ozugbo na tebụl mgbe ị na-akparịta ụka, nke a nwere ike ịkụda onye gị na ya bi. Ya mere, gbalịa jiri nwayọ na-eme mkpebi banyere ihe otu otu.
Mgbe ọ bụla ị tụlere otu isiokwu, gbalịa ime ka onye ị lụrụ n’oge meghachi omume ma kwuo okwu. Nke a ga-enye gị echiche doro anya nke ihe di gị ma ọ bụ nwunye gị chere banyere isiokwu a.
N’okwu ndị ahụ, gbalịa ime ihe ụfọdụ n’enweghị isi ihe ndị ị nweburu na-ewe iwe. Will ga-ahụ na iji agwa ziri ezi na ị ga-enwe mkparịta ụka ka mma.
Iji nye aka mkparịta ụka ahụ, ọ bara uru izere okwu mechiri emechi dịka 'oge niile' na 'agaghị adị'. N'ụzọ dị otú a, ị na-eme mkparịta ụka na-emeghe ma ị nwere ike ịga n'ihu na-enwe ezigbo mkparịta ụka.
Dị njikere ị banye nyocha a kwadebere nke ọma. Nke a gụnyere iche echiche banyere ihe ndị nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma ọ bụ nwee mmetụta uche nye gị.
Kwekọrịtanụ na ekwuputara mmadụ okwu na iwe ọ ga-ewe ya.
Ikwu okwu banyere mkparita uka gi na ndi gi na ha gbara. Wayzọ a ị nwere ohere maka mmetụta uche gị ma ha nwere ike inyere gị aka itinye ihe n'echiche ma ọ bụ nye gị ndụmọdụ ndị ọzọ maka mkparịta ụka n'ọdịnihu.
E nwere ụdị enyemaka dị iche iche dị mgbe ịgba alụkwaghịm siri ike, belụsọ nkwado nke ọkaiwu gị na / ma ọ bụ onye ogbugbo. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọ enyemaka n'aka ndị dị gị nso, ndị na-elekọta mmadụ ma ọ bụ ndị nwere nsogbu gị. N'ihe banyere ịkwado ụmụaka, enwere ndị ọrụ afọ ofufo na ọrụ ndị ntorobịa nwere ike inye nduzi. Ikwu okwu banyere nhọrọ ndị siri ike na-enye udo nke uche, ihe doro anya ma na-eme ka enwe echiche ziri ezi.
Mkpọchi na igodo
Na ọdịmma nke ụmụaka kwesịrị ibute ụzọ dị ka ihe na-egosi n'onwe ya, yabụ na ekwesighi ekwupụta. Mana o nwere ike bụrụ isi ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịrụkọ ọrụ ọnụ: chee echiche ihe ụmụaka ga-achọ? Na emen n'ọtụtụ mkparịta ụka. Mata ụkpụrụ nke ọnyà gị na ya bụ nke mbụ ị ga-eme iji kwụsị ya. Otu esi kwusi ụdị ụkpụrụ a abụghị ọrụ dị nfe: nke a bụ egwuregwu kacha dị elu ma chọọ ka, dịka nne ma ọ bụ nna, lelee ihe dị mkpa maka ụmụaka na ebe mmetụta gị si abịa mgbe gị na onye òtù ọlụlụ gị na-ekwurịta okwu. Zọ kachasị ọsọ ga-eme n’ọdịnihu bụ ịmata ihe na-emetụta gị na ịnwa ịjụ onwe gị ajụjụ a na-eme ka ị kpọchie ma gharazie iji ezi uche soro nne ma ọ bụ nna gị kwurịta okwu. Ma nke ahụ bụkarị ebe isi ihe dị.
Na-eme atụmatụ ịgba alụkwaghịm ma ịchọrọ ịhazi ihe niile dịka o kwere mee maka ụmụ gị? Ka ị ka nwere nsogbu mgbe ịgba alụkwaghịm gasịrị? Egbula kpọtụrụ ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm of Law & More. Anyị ga-enwe obi ụtọ inye ndụmọdụ na inyere gị aka.
Previous Post Tinye akwụkwọ mkpesa gbasara ụlọ ikpe
Next Post Kedu ihe bụ njikọ iwu?